1989 – Year – Channel Myanmar
Skin Deep Skin Deep (1989) ————————— လူတစ္ကိုယ္ အခ်စ္တစ္မ်ိဳး ဆိုသလိုပါပဲ… တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္မိရင္ အခ်စ္ေတြ တဏွာေတြ ေလာဘ ေမာဟ ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါလာတက္ပါတယ္…ဒီဇတ္လမ္းမွာေတာ့ ဇတ္ ဆိုတဲ့ လူဟာ ျပဇတ္စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အဲလစ္ဆိုတဲ့ တစ္ခုလပ္ မိန္းမ တစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ ယူထားသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ အဲလစ္ ဆိုတာကလဲ တကယ့္ ငယ္ကြ်မ္းေဆြပါ တကယ္ခ်စ္လို႔ ယူထားသူေပါ့ ဒါဆို အားလံုး အဆင္ေျပၿပီလား ? မဟုတ္ေသးဘူး ဇတ္ မွာ ထူးျခားတဲ့ အက်င့္ဆိုး တစ္ခု ရွိတယ္ ေတြ႕တဲ့ မိန္းကေလးတိုင္း သူ႔ အျမင္မွာ လွေနတက္ၿပီး အဲ့ဒီမိန္းကေလးေတြနဲ႔ One Night Stan ခ်င္တဲ့ အက်င့္ဆိုးပါပဲ… ဇတ္က အဲ့ဒီအက်င့္က မေကာင္းဘူးဆိုတာကိုလဲ သိေနတယ္ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကုထံုး ဆရာဝန္နဲ႔လဲ အခ်ိန္မွန္ သြားျပတယ္ သူ ရင္းႏွီးတဲ့ ဘားဆိုင္က လူႀကီးကိုလဲ အျမဲ ရင္ဖြင့္တိုင္ပင္တယ္ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနက ပိုဆိုးလာခဲ့တယ္… ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးလဲ ဆိုရင္ ဇတ္ရဲ႕ မိန္းမ အဲလစ္ ခရီးထြက္တဲ့ ...
Pet Sematary(1989) စာရေးဆရာကြီး Stephen King ရဲ့ ဝတ္ထုကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ နာမည်ကျော် ဟော်ရာကားတစ်ကား တင်ပေးထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းခေါင်းစဉ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ သချႋုင်း လို့ ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းအမှန်ကတော့ (Pet Cemetery) ပါ။ဒါပေမယ့် အဲဒီသချႋုင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေက စာလုံးပေါင်းအမှန်ကို မပေါင်းတတ်ဘဲ အသံထွက်အတိုင်း အမှားကြီးရေးခဲ့လို့ ခေါင်းစဉ်မှာကို စာလုံးပေါင်းအမှားဖြစ်နေတာပါ။(မြန်မာလူမျိုးအများစု ပဲ နဲ့ ဘဲ၊ လဲ နဲ့ လည်း၊ ကျ နဲ့ ကြ၊ တတ် နဲ့ တက်လောက်ကို မကွဲသလို သူတို့တွေလည်း C နဲ့ S မှားတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေမို့ မှားခဲ့တာဖြစ်ဖို့များပါတယ်)ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ============မြို့လေးကို အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ဆရာဝန်မိသားစုမှာ သမီးတစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက် နဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင် ပါလာပါတယ်။သူတို့ ပြောင်းလာရတဲ့အိမ်က ကားတွေမပြတ်သွားနေတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမရဲ့ လမ်းဘေးလေးတင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးတွေအတွက်ရော ကြောင်လေးအတွက်ပါ အန္တရာယ်များတဲ့ ...
Dead Poets Society (1989) Dead Poets Society (1989) IMDb - 8.0/10_____Rotten - 84% Won 1 Oscar. Another 19 wins & 18 nominations အခု ပြောမှာက ဒီရုပ်ရှင်ကနေ ကျွန်တော် ဖမ်းဆုပ်လို့ရသလောက် အတွေးမျှင်တွေအကြောင်းပါ။ ဒီ ရုပ်ရှင်ထဲက Robin Willain ရဲ့ စကားကို မှီးပြောရရင် ပညာရေးဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးခေါ်တတ်ဖို့ သင်ပေးရတာပါတဲ့။ကိုယ့်ဘာသာ တွေးခေါ်တတ်ဖို့ (ဝါ) ကိုယ့်ဆင်ခြင်တုံတရား ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ ကိုယ် ရှင်သန်တတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့အရာကရော ဘာများလဲ ကျွန်တော်ကတော့ အနုပညာလို့ပဲ ဆိုချင်တယ်။ ဂီတ စာပေ ကဗျာ ပန်းချီ ဘာမဆိုပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ကဗျာတွေနဲ့ပဲ ဥမေယျပြုသွားပါတယ်။ အတွေးအခေါ်နဲ့ ခံစားချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ ကဗျာဆိုတာဟာ အပေါ်ယံကြည့်ရင် ဘာမှမဆိုင်သလိုနဲ့ တစ်သားတည်းပါပဲ။ အနုပညာကိုမုန်းပါတဲ့ ကျော်ကြားလှစွာသော ဒဿ နိကဆရာကြီး ပလေတိုတောင် သူ ဘယ်လိုပဲ အနုပညာကိုမုန်းမုန်း သူ့ကျမ်းတွေကတော့ အတော်ပြေပြစ်လှပတဲ့ အရေးအသား ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ ဒဿဘ နိကဟာ မဆိုင်သလိုနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲ။ပြီးတော့ကာ တွေးခေါ်မှုဟာ ခံစားချက်မပါရင် အတော်အန္တရယ်ကြီးတဲ့အရာပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ...
Batman (1989) [Unicode]Batman ဇာတ်ကားကတော့ ဒါရိုက်တာ Tim Burtonရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကား၃ကားထဲက တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊Gotham မြို့စွန်ကမိဘနှစ်ပါးလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ လက်စားချေလိုစိတ်၊တရားမျှတမှု့ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ရည်စွမ်းထက်မြက်အောင်လုပ်ပြီး ယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Gotham မှာလူဆိုးကောင်တွေကို ရှင်းလင်းနေတဲ့ Batmanနဲ့လူတစ်ကာကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ လူဆိုးအရူး Joker တို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ကြတဲ့Action ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။[Zawgyi]Batman ဇာတ္ကားကေတာ့ ဒါရိုက္တာ Tim Burtonရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ္ကား၃ကားထဲက တစ္ကားအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊Gotham ျမိဳ့စြန္ကမိဘနွစ္ပါးလံုးဆံုးရွံုးလိုက္ရလို႔ လက္စားေခ်လိုစိတ္၊တရားမွွ်တမွဳ့႕ကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့စိတ္ေျကာင့္ကိုယ္ရည္စြမ္းထက္ျမက္ေအာင္လုပ္ျပီး ယိုယြင္းေနျပီျဖစ္တဲ့ Gotham မွာလူဆိုးေကာင္ေတြကို ရွင္းလင္းေနတဲ့ Batmanနဲ့လူတစ္ကာကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ လူဆိုးအရူး Joker တို႔ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ျကတဲ့Action ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ Batman(1989)File size…(999MB) and (555MB) Quality…BR-Rip 1080p Format…mp4 Duration….02:06:19 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by Min Thant HtooEncoded by Naing Aung Latt
The Gods Must Be Crazy II (1989) The Gods Must Be Crazy II (1989) IMDb - 6.9/10_____Rotten - 54% ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပုလင်းဟာသလို့ လူသိများတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရဲ့ နံပါတ် ၂ ဇာတ်ကားပါ။ ပထမဇာတ်ကား The Gods Must Be Crazy (1980) ကိုတော့ " ဒီလင့်မှာ " ဒေါင်းပါ။ ပုလင်းမင်းသားအကြောင်းဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာဖတ်ပါ။ #Nixau_Toma ( ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့သောလူရိုင်း(သို့) အောင်မြင်မှုငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကိုမသိခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ) .…………………………………………………………… ” ပီတာက ဆိတ်၇ကောင်ပေး မယ်ဆိုလို့ကျတော်လိုက်လာတာ ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုကျတော်အခုမကြားဖူးတာဗျ။ ဒီမှာ နေအခါ၃၀ ဝင်တဲ့အထိနေရမယ်ပြောတယ်။ ပြီးရင်ကျတော် စန်တို့ရှိတဲ့ဆီကို ဆိတ် ၇ကောင်ယူပြီးပြန်မယ်။ ”N!xau Toma တောင်အာဖရိကတိုက်အစွန် နမီးဘီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံသေးသေးလေးအပြင်မြို့ပြနဲ့မိုင် ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ အာဖရိကတောတွင်းတနေရာမှာ စန်ဆိုတဲ့အာဖရိကလူရိုင်းရွာလေးတရွာရှိခဲ့တယ်။ ဒီရွာလေးက နမီးဘီးယားနိုင်ငံထဲကကာလာဟာရီ သဲကန္တာရထဲမှာရှိပြီး အာဖရိယလူရိုင်းမျိူးနွယ်တွေထဲမှာ ခေတ်နောက်အကျဆုံးလူမျိူးစုတွေထဲက ၁၂ရာစုလူနေမှုစနစ်လိုနေထိုင်ကြတဲ့ ဘာဆာဝါ ဆိုတဲ့လူရိုင်းမျိူးနွယ်စုရဲ့ရွာလေးပါ။ အမဲလိုက် ပျားအုံဖွတ် ...
Honey, I Shrunk the Kids (1989) Honey, I Shrunk the Kids (1989) IMDb - 6.4/10_____Rotten - 76%ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မအောင်မြင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ စက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ ပေါက်တတ်ကရတွေဖြစ်သွားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်.... သိပ္ပံပညာရှင်သျှာလင့်စကီတစ်ယောက်အရာဝတ္တုတွေကိုသေးအောင်လုပ်တဲစက်တစ်ခုကို ဖန်တီးနေတာ နှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ...သူရဲ့ဖန်တီးစမ်းသပ်မှု့တွေကြောင့်လည်း ဘေးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါ နေ့ရောညပါအနှောင့်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ကိုအရူးတစ်ယောက်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်... တစ်နေ့မှာသူနှစ်ပေါင်းများစွာတီထွင်ပေမယ့်လည်း အောင်မြင်ခြင်းမရှိတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကိုသေးအောင် ချုံ့တဲစက်ဟာ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဆော့ရင်းကနေ ထိခိုက်မိပြီး ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်....အဲစက်ကနေသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုအင်းစက်အရွယ်စားထိချုံ့ပစ်လိုက်ပါတယ်... အဲဒီနောက်မှာတော့ ထိုလူငယ်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ခြံဝန်းထဲကနေပြန်ပြီးတော့ အိမ်ကိုရောက်အောင် ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်... သာမန်အနေထားဆိုရင် ခြံဝန်းနဲ့အိမ်ကို ခြေသုံးလှမ်းလောက်ပဲလှမ်းရမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း အင်းဆက်အရွယ်သာသာဖြစ်သွားတဲသူတို့အတွက်အိမ်ထဲကိုပြန်ပြီးရောက်အောင် မိုင်ပေါင်းထောင်ချီအောင် ခရီးဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်.. ထိုသို့ခရီးဆက်ရင်းလမ်းခရီးမှာဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်... Disney ကတင်ဆက်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ လူကြီးလူငယ်ပါကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... Quality…..BluRay 1080p Duration…..01:33:00 Format…Mp4 File Size…(737 MB) Translator…..Khin Chan Myae Tun Encoder…..Moe Myint Lwin
God of Gamblers (1989) ဒီဇာတ္ကားဟာ စတီဖင္ေခ်ာင္ ဆက္ရိုက္ကူးမယ့္ God of Gamblers ဇာတ္ကားေတြရဲ႕ အစပထမဇာတ္ကားပါ။ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ စတီဖင္ေခ်ာင္မပါေသးပါဘူး။ေခ်ာင္ယြန္ဖက္ကို အဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ ေလာင္းကစားဘုရင္အေနနဲ႕ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။Andy Lau လဲပါဝင္ထားျပီး Action,Comedy,Drama အမ်ိဳးအစားဇာတ္ကားပါ။God of Gamblers ဇာတ္ကား (၃) ကားလံုးကို https://channelmyanmar.org/?s=god+of+gamblers မွာရွာပါ။ File Size...(950MB) and (440MB) Quality...BluRay Rip 720p Format...mp4 Duration...02:06:00 Subtitle...Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder...Nyeinsaeya Aung Translated by Missy Win
The Little Mermaid (1989) The Little Mermaid (1989)_____IMDb - 7.6/10 Won2Oscars. Another 10 wins & 8 nominations Rating 7.6 အထိရရှိထားတဲ့ Disney ရဲ့ Animation ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... ဒီကားလေးထဲမှာပါတဲ့ ရေသူမလေးအေရီရယ်ဟာ Disney ကပွဲထုတ်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး... ပင်လယ်ပြင်ရေအောက်ရဲ့အလှအပတွေကို ဒီကားလေးထဲမှာတဝကြီးခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်.... ဒီကားလေးဟာ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတည်းက မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..... ဒီကားလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပင်လယ်ပြင်ကိုရွက်လွှင့်လာတဲ့မင်းသားလေးကို ချောမောလှပတဲ့ ရေသူမလေးအေရီရယ်က မြင်မြင်ချင်းမေတ္တာသက်ဝင်သွားမိပါတယ်.... ဒါကြောင့် ပင်လယ်ပြင်ကိုပိုင်စိုးချင်နေတဲ့ ပင်လယ်စုန်းမကြီးဆီမှာ လူသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးဖို့ သူမရဲ့အသံနဲ့အပေးအယူလုပ်ခဲ့ပါတယ်.... ဒီကို အချစ်ကြောင့် ဘာကိုမှမမြင်ပဲလုပ်လိုက်မိတဲ့ရေသူမလေးအေရီရယ်တစ်ယောက် တကယ့် အချစ်စစ်ကိုကောရနိုင်ပါ့မလား သူမရဲ့သူငယ်ချင်းရေသတ္တဝါလေးတွေကကော သူမကိုဘယ်လိုကူညီပေးကြမလဲ သူမကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ ပင်လယ်စုန်းမကြီးဆီကနေကယ်တင်လို့ရနိုင်မလားဆိုတာတွေကို ရသစုံလင်စွာ ကြည့်ရှု့အပန်းဖြေလို့ရမယ့် Animation ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်... Rating 7.6 အထိရရွိထားတဲ့ Disney ရဲ႕ Animation ကားေကာင္းေလးတစ္ကားၿဖစ္ပါတယ္.... ဒီကားေလးထဲမွာပါတဲ့ ေရသူမေလးေအရီရယ္ဟာ Disney ကပြဲထုတ္ထားတဲ့ မင္းသမီးေလးေတြထဲကတစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး... ပင္လယ္ၿပင္ေရေအာက္ရဲ႕အလွအပေတြကို ဒီကားေလးထဲမွာတ၀ၾကီးခံစားရမွာလည္းၿဖစ္ပါတယ္.... ဒီကားေလးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ငယ္ငယ္ေလးတည္းက မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ကားေလးတစ္ကားၿဖစ္ပါတယ္..... ဒီကားေလးရဲ႕ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကိုေၿပာၿပရမယ္ဆိုရင္ၿဖင့္ ပင္လယ္ၿပင္ကိုရြက္လႊင့္လာတဲ့မင္းသားေလးကို ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ေရသူမေလးေအရီရယ္က ၿမင္ၿမင္ခ်င္းေမတၱာသက္၀င္သြားမိပါတယ္.... ဒါေၾကာင့္ ပင္လယ္ၿပင္ကိုပုိင္စိုးခ်င္ေနတဲ့ ပင္လယ္စုန္းမၾကီးဆီမွာ လူသားၿဖစ္ေအာင္ဖန္ဆင္းေပးဖို႕ သူမရဲ႕အသံနဲ႕အေပးအယူလုပ္ခဲ့ပါတယ္.... ဒီကို အခ်စ္ေၾကာင့္ ဘာကိုမွမၿမင္ပဲလုပ္လိုက္မိတဲ့ေရသူမေလးေအရီရယ္တစ္ေယာက္ တကယ့္ အခ်စ္စစ္ကိုေကာရႏိုင္ပါ့မလား သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေရသတၱ၀ါေလးေတြကေကာ သူမကိုဘယ္လိုကူညီေပးၾကမလဲ သူမကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွတဲ့ ပင္လယ္စုန္းမၾကီးဆီကေနကယ္တင္လို႕ရႏိုင္မလားဆိုတာေတြကို ရသစံုလင္စြာ ...
Sea of Love (1989) Sea of Love (1989) IMDb (6.8/10)...Rotten Tomatoes (76%) မင်းသား Al Pacino ...John Goodman နဲ့ မင်းသမီး Ellen Barkin တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီအမေရိကန်ဇာတ်ကားဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Crime/Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဟက်တန်မှာ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ယောက် သောင်းကျန်းနေပါတယ်။ ဒီလူသတ်သမားက သူ့ရဲ့သားကောင်တွေကို သတင်းစာရဲ့ "အထီးကျန်သူများ" (တနည်း) "FA များ" ကော်လံစာမျက်နှာကနေရှာတယ်။သတ်တယ်။ ဒီတော့ စုံထောက်ကလဲ FA အသွင်ဆောင်ပြီး လူသတ်သမားကိုဖမ်းဖို့ကြံတယ်...။ ဒီလို အသွင်ယူ လန်ကြုတ်နေရာကနေ ဆင်ဂယ်လ်မားသားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး အချစ်နယ်ကျွံရာ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီမိန်းမကပဲ သူရှာနေတဲ့ တရားခံဖြစ်နေမလားလို့ စိတ်ထဲထင်ရင်။..... ဒန် တန့်တန်...။ ZAWGYIမင္းသား Al Pacino ...John Goodman နဲ႔ မင္းသမီး Ellen Barkin တို႔ပါဝင္ထားတဲ့ ဒီအေမရိကန္ဇာတ္ကားဟာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Crime/Drama အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။မန္ဟက္တန္မွာ ...